သွားအစွန်းအထင်း Remove | သွားလမ်းညွှန် Whiten ဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းစဉ်
tagged posts "သွားအစွန်းအထင်း Remove"
တတ်နိုင်သမျှကဲ့သို့ဖြူကိုသင့်အံသွားရယူခြင်းစျေးကြီးနှင့်အချိန်ကုန်စေနိုင်ပါတယ်. အံသွား Whiten ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်. သင်တစ်ဦးလွယ်ကူသောဖက်ရှင်အတွက် Whiten အံသွားကိုကူညီနိုငျသောဤအကြံပြုချက်များအသုံးပြုခြင်း.
သင်သည်သင်၏အံသွား Whiten အားပြုသင့်ကြောင်းပထမဦးဆုံးအရာကိုမှန်မှန်သွားသန့်ရှင်းရေးတက်ရောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ပါးစပ်တွင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအတူ biannual သန့်ရှင်းရေးချိန်းတက်ရောက်ရန်သေချာပါစေ. ဒါဟာရုံဖြစ်ကောင်းခက်ခဲမနက်ဖြန်အဖြစ်နှစ်ကြိမ်နိန်အပေါ်တနေ့နဲ့အစီအစဉ်အနားမှာရှောက်သွားစေမဟုတ်ဘဲရိုးရှင်းတဲ့နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ပြုဘယ်တော့မှသငျ့သ​​ညျအရာတစ်ခုခုရဲ့. ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ကချော်မလဲကွပါစို့နှင့်သင်တို့တစ်အလေ့အထထဲသို့ကျနဲ့ညာဖက်ကိုပြန်စတုရန်းတစ်သှားဖို့ဖွယ်ရှိနေ.
အကြံပြုချက်! ကော်ဖီရှောင်ရှားဖို့သေချာပါစေ, စပျစ်ရည်နှင့်စီးကရက်. ထိုထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့အံသွားကိုရှုတ်ချမည်ကိုမှောင်မိုက်ဓာတုပစ္စည်းဆံ့.
ဒါဟာအကြိမ်ကြိမ်စီးကရက်မီးခိုးသင့်ရဲ့အံသွား discolors ကသရုပ်ပြခဲ့.
အံသွား strips တွေ whitening ရလွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်, သူတို့ကအတော်လေးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့များမှာ. ရိုးရှင်းစွာအညွှန်ကြားချက်၌ပေးသောအချိန်ပမာဏကိုအဘို့သင့်အံသွားပေါ်ချွတ်ထားပါ, နှင့်သင့်အံသွား whitened လိမ့်မည်. ဤရွေ့ကား strips တွေဆင်းရဲသားကိုရလဒ်များကိုပူဇော်ဖို့ထိန်းကြပြီ, သူတို့သည်လည်းအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်ဖို့အသုံးပြုနေစဉ်, သူတို့စားသုံးသူများအားဖြင့်အများကြီးအဖြစ်ဝယ်ကြသည်မဟုတ်.
အကြံပြုချက်! သင်တစ်ဦးသည်ဘောဇဉ်ကိုစားတစ်ခုသို့မဟုတ်အဖျော်ယမကာမသောက်ပြီးနောက်, သငျသညျခကျြခငျြးသင်၏နှုတ်ထဲကအသုတ်ဖို့ရေကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်. ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့အံသွား staining မှကျန်ကြွင်းစောင့်ရှောက်ကူညီပေးပါမည်.
Floss နှင့်နေ့စဉ်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်သင့်ရဲ့အံသွားတိုက်. ဒါဟာဆောနှင့်သင့်အံသွားအကုန်လုံးနှင့်အရောင်ပြောင်းကြည့်ရှုစေနိုင်မီကသငျသညျပြားကိုတိုက်ကူညီပေးသည်. အဲဒီအစားပြားညဉ့်လုံးကိုသင့်အံသွားပေါ်ထိုင်ဖို့ခွင့်ပြုထက်, အိပ်ရာဝင်ချိန်မီကဖြီးနဲ့ကြားရှင်းကြိုး.
အကြံပြုချက်! စတော်ဘယ်ရီနှင့်အတူသဘာဝသင့်ရဲ့အံသွား Whiten. စတော်ဘယ်ရီအဖြူအံသွားထုတ်လုပ်ရန်လူသိများခဲ့ကြ.
သငျသညျထုတ်လုပ်ရန်စေခြင်းငှါထုတ်ကုန် whitening အချို့သောသွားနှင့်ကိုက်ခဲတဲ့ sensitivity ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းငှါ. ဒါဟာအတော်လေးနာကျင်စေနိုင်ပါတယ်နှင့်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်စေခြင်းငှါပေမယ်ဆဲနှိပ်စက်တာ. သင်ဤ sensitivity ကိုသည်းခံလျှင်, သင်သည်မည်သည့် Whiten ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပွုဖို့ဆက်လက်ရှေ့၌သင်တို့သွားဆရာဝန်သွားရောက်. သူကသင့်ရဲ့အံသွားကြောင်းလမ်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်မည်မဟုတ်ကြောင်းထုတ်ကုန်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်.
သင်သည်သင်၏အံသွား Whiten ရန်အဘို့အကဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်းသေချာစေရန်သင့်ရဲ့သွားဆရာဝန်ကနေတစ်ဦးကို check-up က Get. တိုင်းအိမ်မှာ whitening ထုတ်ကုန်ထွက်ကြိုးစားနေသင်၏အချိန်နှင့်ငွေကိုမဖြုန်းတီးပါနဲ့. သင့်ရဲ့သွားဆရာရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မှီခိုသင်တို့အဘို့အအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်သောထုတ်ကုန်ရှာတွေ့၏ဝေးသောပိုမိုထိရောက်သောနည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်.
အကြံပြုချက်! ရေအများကြီးသောက်ခြင်းအဖြူသင့်ရဲ့အံသွားကိုစောင့်ရှောက်ကူညီရမယ့်ကြီးမြတ် technique ကိုဖြစ်ပါတယ်. မကြာခဏအခြေခံပေါ်မှာသောက်ရေဖွဲ့စည်းမှအစွန်းအထင်းကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးပါမည်နှင့်လောလောလတ်လတ်ဆေးသင့်ရဲ့အံသွားစောင့်ရှောက်မည်.
တစ်ဦးကောက်ရိုးတဆင့်သောက်ခြင်းအဖျော်ယမကာမှသွားအစွန်းအထင်း minimize နိုင်. အဆိုပါကောက်ရိုးအဖျော်ယမကာသင့်ရဲ့အံသွားကိုရှုတ်ချဖို့ရှိပါတယ်အချိန်ကိုလျှော့ချအတွက်ကူညီပေးသည်. အဆိုပါအရည်ဖြောင့်သင့်ရဲ့လည်ချောင်းဆင်းအစားသင့်ရဲ့အံသွားနဲ့အဆက်အသွယ်အောင်တတ်.
အကြံပြုချက်! တစ်ဦးကသွားဘက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်ပြန်ထုတ်ကုန်ကျော်အသုံးပြုတဲ့အခါထက်ပိုမိုမြင့်မားအရည်အသွေးပြည့်ရလဒ်များကိုရယူနိုင်သည်. ဒီပိုကုန်ကျစရိတ် whitening သွားနည်းလမ်း, ဒါပေမဲ့ရလဒ်များကိုချက်ချင်းများမှာ.
သင့်ရဲ့သွားဆရာမှာနေအိမ် Whiten ပစ္စည်းများသင့်ရဲ့အံသွားသို့မဟုတ်သွားဖုံးထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲထိရောက်သောနေသောအကြောင်းအရာကိုသင်တို့အကွံဉာဏျပေးစေခြင်းငှါစွမ်းနိုင်စေခြင်းငှါ.
ကောင်းသောအဘို့အဆေးလိပ်သောက်တက် Give. ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကသင့်ခြုံငုံနျြးမာရေးအတှကျဆိုးဖြစ်လူသိများခဲ့စဉ်တွင်, ဒါကြောင့်လည်းသင့်ရဲ့အံသွားဘို့မကောင်းဘူး. တကယ်တော့, တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးဆေးလိပ်သောက်သောအထင်ရှားဆုံးလက္ခဏာသက်သေတဦးကသူတို့ရဲ့အဝါရောင်အံသွားသည်. ဆေးလိပ်စဉ်ဒါဟာအဖြူအံသွားကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်. ဆေးလိပ်ဖြတ်အလွန်ခဲယဉ်းသည်, သင်မူကားကိုရှောင်ကြဉ်တိုင်းစီးကရက်သင့်ရဲ့အံသွားပေါ်သက်ရောက်မှုများလျှော့ချလိမ့်မည်.
အကြံပြုချက်! လျှပ်စစ်တံတစ်ချောင်းဝယ်ယူလည်းဖြူအံသွားရမယ့်ကြီးမြတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. အီလက်ထရောနစ်သွားပွတ်တံအစာမှအစွန်းအထင်းကိုဖယ်ရှားကူညီ, စပျစ်ရည်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တစ်ဦးကို manual တံတစ်ချောင်းထက်.
သငျသညျကွီးစှာသော smile.Food နှင့်အခြားပစ္စည်းများရှိပါကသင့်ရဲ့အံသွားပေါ်တည်ဆောက်နှင့်အချို့သောအချိန်ပြီးနောက်သူတို့ကိုအရောင်ပြောင်းသို့မဟုတ်ရှုတ်ချနိုင်ပါတယ်မှန်မှန်သင့်ရဲ့အံသွားတိုက်. သငျသညျနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်မှန်မှန်သင့်ရဲ့အံသွားတိုက်အဖြစ်အရောင်ပြောင်းနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာခံရဖို့ရှိသည်မဖြစ်သင့်.
အိမ်မှာ whitening သွားတိုက်ဆေးသို့မဟုတ် strips တွေသုံးတဲ့အခါသင့်ရဲ့အံသွားနှင့်သွားဖုံးအတွက်မဆို sensitivity ကိုများအတွက် Watch. ဒီပေါ်ပေါက်ပါဘူးဆိုရင်, သူတို့ကို၌ရှိသကဲ့သို့အများကြီးပါအောက်ဆိုဒ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ကြည့်ရှု. အများအားဖြင့်, ဤအသေးအဖွဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုသင်ထုတ်ကုန်သုံးပြီးစတင်ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်.
အကြံပြုချက်! သင့်ရဲ့ရှေးခယျြထားတဲ့အံသွားနည်းလမ်း performance whitening ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းကိုသိပါ. သင်တစ်ဦး Whiten နည်းလမ်းထက်ပိုမိုမျှော်လင့်ထားလျှင်ကယ်မနှုတ်နိုင်စိတ်ပျက်စေခြင်းငှါ.
သွားကြွေအံသွားကိုထိခိုက်စေနိုငျသောအမြစ်များနှင့်အခြားအန္တရာယ်များ၏ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ဓာတ်သတ္တုတ္ထုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်. Whiten ထုတ်ကုန်အတွက်တချို့ကဓာတုပစ္စည်းများ, ခိုင်ခံ့သောအက်ဆစ်အပါအဝင်, သင့်ရဲ့ကြွေလွှာကိုပျက်စီးစေခြင်းနှင့်အခြားဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်.
အကြံပြုချက်! ဒါဟာသံပုရာနှင့်ထုံးရည်ကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့အံသွားတောက်ပရတဲ့အတှကျကောငျးတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်တဲ့ကျယ်ပြန့်အထငျမှားသည်, ဒါပေမဲ့ဒီရုံကိစ္စတွင်မက. သူတို့အတန်ငယ်သင့်ရဲ့အံသွား Whiten နိုင်ပါတယ်စဉ်အတိုင်းဤမှန်ကန်သောမဟုတ်ပါဘူး, သူတို့အဖြစ်ကိုကောင်းစွာတဲ့အန္တရာယ်ရှိ.
အမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှုကိုသင့်ရဲ့ထိပ်တန်းအံသွား-whitening ဦးစားပေးရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျခကျြခငျြးသင့်ဆရာဝန်သွားရောက်သင့်ပါတယ်. သင့်ရဲ့အံသွား whitening အမြဲတစ်လွယ်ကူသောအလှကုန်ပစ္စည်းသတိကြီးကြီးထားမဖြစ်. တစ်ဦးသွားဆရာဝန်ကိုမြင်လျှင်မရှိရင်, သင်အချိန်ကိုကျော်သင့်ရဲ့အံသွားနှင့်သင့်ယေဘုယျပါးစပ်ကနျြးမာရေးထိခိုက်စေအန္တာရာယ်.
သင်မှန်မှန် FLOSS သေချာအောင်လုပ်ပါ. ကိုအလွန်မဝင်ပြားဖယ်ရှားရေးအတွက်သောအထောက်အကူ, တစ်ပြန်တစ်လှည့်, သင့်ရဲ့အံသွားအစွန်းအထင်းတားဆီးကူညီပေးနိုင်ပါသည်. နေ့စဉ်မဝင်၏အလေ့အထအတွက် Get စီစာစားပြီးနောက်ကိုအသုံးပြုရန်သင်နှင့်အတူအချို့သောသယ်. သငျသညျဘက်တီးရီးယားသင့်ရဲ့အံသွားပေါ်ညဉ့်လုံးနေရစ်ဖို့ခွင့်ပြုကြပါဘူးဒါကြောင့်အိပ်ရာဝင်ချိန်ရှေ့၌သင်တို့အံသွား FLOSS ရန်သေချာစေပါ.
အကြံပြုချက်! crunchier အစားအစာများစားသုံးခြင်းကြိုးစားပါ. အံသွားခဲဆလရီစားခြင်းမှ ပို. အဖြူဖွစျလာနိုငျ, ပန်းသီးနှင့်မုန်လာဥနီ.
အံသွားခဲခြံ whitening သင့်ရဲ့အံသွား Whiten မှကြီးမြတ်လမ်းဖွစျနိုငျ. သူတို့တစ်တွေအရောင်ချွတ်အရောင်တင်ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့နေသောကြောင့်သင် gels သုံးနေတယ်သည့်အခါလိမ်းဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသတိထား Be. သငျသညျဤနည်းလမ်းနှင့်အတူသတိထားသုံးစွဲဖို့ရှိသည်နှင့်သင်မကြာခဏထိုသို့ပြုကြပါဘူးသေချာအောင်.
တစ်လုပ် Whiten ထုတ်ကုန်များအတွက်သံပုရာဖျော်ရည်ကိုနှင့်စားပွဲပေါ်မှာဆားရောမွှေ. တစ်ဦးကွန်တိန်နာထဲမှာချိတ်ပိတ်အရောအနှောကိုသိမ်းဆည်းထားပါ, ထိုသို့ပွိုကှဲစတေဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်စိုးရိမ်ပူပန်နှင့်အတူအချိန်ကျော်အသုံးပြုရန်.
အကြံပြုချက်! သင်သည်သင်၏သွားဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်မှီတိုငျအောငျအံသွား Whiten အသုံးပြုဘယ်တော့မှသင့်တယ်. သင်ပတ်ဝန်းကျင်လူဖြူအတှကျလိုအပျလုံးကိုအကောင်းတစ်သန့်ရှင်းရေးခဲ့ကွောငျးတှေ့စေခြင်းငှါ.
လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံကိုသင့်အပြုံးတောက်ပစေတယ်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းထက် သာ. ကောင်း၏. လျှပ်စစ်စွမ်းအားသွားပွတ်တံစင်ကြယ်သောကောင်းစွာအံသွားနှင့်များသောအားဖြင့်သင့်ရဲ့အံသွားရဲ့မျက်နှာပြင်ဧရိယာကနေမဆိုအဝါရောင်အရောင်ချွတ်ဆေးကြောသန့်စင်သည်သင်၏ teeth.They ၏အပေါ်ယံအရောင်ပြောင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်အသုံးပြုကြသည်.
သင့်ရဲ့အံသွား staining ကာကွယ်တားဆီးဖို့လက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီကနေသွားကြနေဖို့. သငျသညျမှာအားလုံးသူတို့ကိုမသောက်ရသောအခါဤအဖျော်ယမကာအံသွားအရောင်ပြောင်း.
အကြံပြုချက်! အစားအစာများအဖြူနှင့်သန့်ရှင်းသောသင်တို့၏အံသွားစောင့်ရှောက်ဖို့သွားဖုံးဝါးပြီးနောက်. သောဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ရပ်ကရေပန်းစားအရောင်ပြောင်းလိမ့်မည် whitening အေးဂျင့်ဆံ့များစွာကိုသွားဖုံးရှိပါတယ်.
whitening သွားများအဖြစ်ကြော်ငြာထားတဲ့သွားတိုက်ဆေးအားဖြင့်အရူးလုပ်ခံရမနေပါနဲ့. သူတို့ကသင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့ကူညီစေခြင်းငှါ, သင်မူကားအခြားနည်းလမ်းနှင့် တွဲဖက်. သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျ whitening သွားတိုက်ဆေးချင်တယ်ဆိုရင်, မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါများပါဝင်သည်တပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆို.
သင်တစ်ဦးငှက်ပျော၏အခွံကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့အံသွားနိန်ကွိုးစားပါစေခြင်းငှါ. လူအတော်များများဟာဒီရိုးရှင်းတဲ့လှည့်ကွက်အတော်လေးထိရောက်သောဖြစ်ရှာတွေ့. Whiten ရန်သင့်အံသွားအပျေါမှာငှက်ပျောခွံ၏အတွင်းပွတ်သပ်. ထိုအခါ, ပုံမှန် Brush နှင့်အတူလိုက်. အဆိုပါ whitening ရလဒ်များကိုချက်ချင်းသိသာဖြစ်လိမ့်မည်.
အကြံပြုချက်! အစားဆေးဆိုင်သင့်ရဲ့ခြံအတွက်ထုတ်ကုန် whitening အံသွားရှာရန်. ထို walnut သစ်ပင်တပင်၏အခေါက်အံသွားကနေအစွန်းအထင်းဖျက်သိမ်းရေးအတွက်လည်းလူသိများသည်.
သငျသညျကိုယ်ဝန်မဆိုအဆင့်၌ရှိကြ၏သို့မဟုတ်နို့တိုက်လျှင်တစ်ဦးအံသွား whitening system များကိုအသုံးပြုဘယ်တော့မှရန်သေချာစေပါ. မျှော်လင့်ချက်များနှင့်သူနာပြုမိခင်များအလွန်ထိခိုက်မခံတဲ့သွားဖုံးများ. ဖြည့်စွက်ကာ, ထိုထုတ်ကုန်မှာတွေ့ရတဲ့ဓာတုပစ္စည်းပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်. အစား, ကိုယ့်ဒီအထူးအချိန်ကာလအတွင်းအကောင်းတစ်ဦး Brush နဲ့ Floss လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နှင့်အတူတောက်ပသင့်ရဲ့အပြုံးစောင့်ရှောက်. သင့်ကိုယ်ဝန်သို့မဟုတ်သူနာပြုအချိန်ပြည့်စုံသည်ပြီးနောက်သင်တို့၌အစဉ်သင့်ရဲ့အံသွား whitened ရှိသည်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်.
အဘယျသို့နည်းလမ်း whitening သင့်ရဲ့အံသွားကနေမျှော်လင့်ထားရန်သင့်အဘို့ပြုသွားသည်ကိုသိပါ. သင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်လည်းမြင့်မားလျှင်သင်စိတ်ပျက်တက်သည်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်. မြျှောလငျ့တို့အားအဘယ်သို့သွားဆရာဝန်ကိုမေး.
သငျသညျချင်တဲ့အဖြူအံသွားရယူခြင်းစျေးကြီးနှင့်အတန်ငယ်တစ်လုပ်ရတဲ့၏ဖြစ်နိုင်. အများစုကကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ်သင်သည်လည်းဖြူအံသွားရကူညီထွက်ရှိပါတယ်. ဤအကြံပြုချက်များလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်, သငျသညျပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းချက်ပေါ်တွင်သင်၏ပိုက်ဆံဖြုန်းမပါဘဲလည်းဖြူအံသွားရတယ်.
Whiten သွားလမ်းညွှန် Posted by ကို - ဇွန်လ 5, 2016 12 မှာ:39 နံနက်
categories: Whiten သွားဖို့အခြေခံပြီးမူလစာမျက်နှာ Tags:: အရောင်ပြောင်း Remove, သွားအစွန်းအထင်း Remove, အံသွားအစွန်းအထင်း